TOP NEWS: Turkiga oo Ciidamo Badan Geeyay Magaalada Doha ee Caasimadda Dalka Qatar. | Wararka Jubbaland
Wasiirka difaaca dowladda Qatar ayaa shaaciyay in ciidamadii ugu horeeyay ee ka socda dowladda Turkiga ay soo gaareen magaalladda Doha ee caasimada dalka Qatar, si ay uga qeyb-qaataan dhoola tus military oo wada jir ah.
Ciidamada ayaa tababaradoodii ugu horeeyay ka bixinaya saldhiga military ee lagu magacaabo Tariq bin Ziyad base.
Tababarkan ayaa waxaa uu yahay mid muddo la qorsheynayay, waxaana uu qeyb ka ahaa heshiis laba dhinac ah oo dowladdaha ay wada gaareen, kaas oo lagu adkeynayo awooda labada waddan iyo sidii deganaashaha iyo xasiloonida loo darsi lahaa.
Heshiiskaasi ayaa la wada saxiixay bishii April ee sanadkii 2016.
Horaantii bishan Baarlamaanka dalka Turkiga ayaa meelmariyay hindise oggolaanaya in ciidamo Turkish ah loo daadgureeyo dalka Qatar.
Dowladda Turkiga ayaa safka hore kaga jirta waddamada taageersan dowladda Qatar tan iyo 5-tii bishan June markii uu soo bilowday khilaafka u dhexeeya waddamada Khaliijka iyo Qatar.
Booliiska oo xabsiga dhigay nin gaari jiirsiiyay dad ku sugnaa nawaaxiga masjid ku yaalla London
Ugu yaraan hal qof ayaa dhintay halka siddeed kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari la jiirsiiyay ama la dulmariyay dad ku sugnaa hareeraha waddo aad ugu dhow masjid ku yaalla waqooyiga magaalladda London.
Police-ka magaalladda ayaa sheegay in ay la tacaaleen dadkii ku dhaawacmay shilka, waxaana ay diideen in weerarka uu la xiriiro mid argagixiso.
Sidoo kale ciidamada nabadgelyada ayaa xabsiga dhigay nin 48 jir ah oo lala xiriiriyay shilka ka dhacay agagaarka masaajidka degmada Finsbury Park.
Shilkan wuxuu ka dhacay Wadada Seven Sisters. Ciddamada booliska ayaana goobtaas isku gadaamay.
Guddiga Muslimiinta ee Britain ayaa sheegay in gaari si qasab ah loo jiirsiiyay dad cibaadeysanayay.
Dadka dhacdadaasi ku waxyeeloobay ayaa la aamminsan yahay inay kasoo laabteen salaada tahajudka.
Shilka markii uu dhacay kadib ciidamada ayaa xiray waddooyin badan oo ka agdhaw masjidka, waxaana ay sameyeen howgallo.